Pcb विनिर्माण सभा - शेन्जेन KAISHENG PCB CO।, LTD
Pcb विनिर्माण र विधानसभा - PCBFuture
कीवर्ड: PCB असेंबली, PCB निर्माण र असेंब्ली, PCBA क्षमता
पीसीबीफ्यूचरसँग कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली छ र सबै प्रमाणपत्रहरू जस्तै TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, आदि। पीसीबीको लागि हामीसँग फ्लाइंग प्रोब टेस्ट र ई-परीक्षण छ। PCBA का लागि, हामीसँग IQC, AOI, प्रकार्य परीक्षण, QA छ। यी पीसीबी उद्योगका लागि आधारभूत तर धेरै महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन्।
सबैभन्दा लोकप्रिय को रूप मा इलेक्ट्रोनिक असेंबली कम्पनीहरू चीनमा, हामी चिनियाँ बजारको आवश्यकताहरू पूरा गर्न १० बर्षदेखि पूर्ण-विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक उत्पादन समाधानहरू प्रदान गर्दै आएका छौं।
हामीसँग लागत-प्रभावकारिता, गुणस्तर, वितरण र कुनै पनि अन्य आवश्यकताहरूको सर्तमा विभिन्न उद्योगका ग्राहकहरू छन्। पीसीबी लेआउटबाट पीसीबी प्रोटोटाइप, मास म्यानुफ्याक्चरिंग, र त्यसपछि पीसीबी असेंबली, इलेक्ट्रोनिक बक्स असेंबली सेवाहरू, हाम्रा मुद्रित सर्किट बोर्डहरू रोबोटिक्स, मेडिकल, मोटर वाहन, सञ्चार, औद्योगिक र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हामी निम्न व्यवसायहरूमा संलग्न छौं: लचिलो पीसीबी, कस्टम पीसीबी, प्रोटोटाइप पीसीबी, टर्नकी पीसीबी असेंब्ली, इलेक्ट्रोनिक पीसीबी असेंबली, सानो ब्याच पीसीबी विधानसभा, आदि।
किन हाम्रो pcb निर्माण र विधानसभा छनौट गर्नुहोस्:
१. एकदम उच्च परिशुद्धता र सटीक-हाम्रो प्रोटोटाइपहरू शुद्धतामा उत्कृष्ट छन् र ग्राहकको विशिष्टताहरू पूरा गर्न सक्दछन्। यो किनभने हामी गुणवत्ता र विवरण गम्भीरतासाथ लिन्छौं।
२.अघिको टर्नअराउन्ड - हामी ग्राहकको समयको मूल्य बुझ्छौं। त्यसकारण हामी तपाईंको प्रोटोटाइप उचित गतिमा निर्माण गर्न प्रयास गर्दछौं। तसर्थ, हाम्रो द्रुत प्रोटोटाइप पीसीबी असेंबली सेवाले तपाईंको प्रतीक्षा समय केहि हप्ताबाट केहि मिनेटमा छोटो बनाउन सक्छ।
E.असल एकदम कम मुल्य - हामीसंग तपाईको मूल्य कम र सस्तोमा राख्न मद्दतको लागि एक व्यापक दृष्टिकोण छ। तसर्थ, हामी एक उचित बजेट को साथ तपाइँको परियोजना को पूरा गर्नेछौं।
E. त्रुटि सुधार - हाम्रो पीसीबी प्रोटोटाइप दोषहरू फेला पार्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसले पछि पछि प्रमुख असफलताहरूबाट बच्न सक्छ। यी दोषहरू जतिसक्दो चाँडो हटाउनाले तपाईंलाई धेरै समय र खर्च बचत गर्न सक्छ
।।द्रुत मोड pcb असेंबली- तपाइँ पीसीबी प्रोटोटाइप अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले केवल पीसीबी डिजाइन पेश गर्न आवश्यक छ र परिणामहरू प्राप्त गर्न।
Full. नमूना परीक्षण पूर्ण उत्पादन भन्दा पहिले - हामी तपाईंलाई प्रोटोटाइप बोर्डहरू परीक्षण गर्न र तिनीहरू आवश्यक अनुसार काम गर्छौं भनेर निश्चित गर्न अनुमति दिन्छौं।
पीसीबी असेंबली क्षमता:
सतह माउन्टिंग (एसएमटी)
थ्रु होल (THT)
श्रीमती र THT संकर
एकल वा डबल पक्षीय प्लेसमेन्ट
फाइन पिच कम्पोनेन्टहरू
BGA र अधिक
पीसीबीए को लागी सूचना आवाश्यक:
तल दिइएका इलेक्ट्रोनिक्स र सम्बन्धित उपभोग्य वस्तुहरूको सूची छ जुन मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबलीका लागि आवश्यक छ:
• मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी)
• विद्युतीय कम्पोनेन्ट्स रेसिस्टर्सहरूको रूपमा।
• सोल्डरिंग सामग्रीहरू जस्तै तार, प्रिफार्म, बार, फ्लक्स र टाँस्नुहोस्।
• सोल्डरिंग उपकरणहरू जस्तै वेभ सोल्डरिंग मेशिन, सतह माउन्टर, एसएमटी-स्टेन्सिल, सोल्डरिंग फिक्स्चर र परीक्षण उपकरणहरू आदि।
पीसीबीफ्यूचर स्थापना भएदेखि नै, हामी देश र विदेशका धेरै कम्पनीहरूसँग गुणस्तरको विचारको साथ सहकारी र ग्राहकको ईश्वर हो जसले उच्च लोकप्रियता प्राप्त गरेको हो। हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू, राम्रो गुणस्तरका उत्पादनहरू र उत्कृष्ट सेवाका साथ over० भन्दा बढी देशहरूबाट कम्पनीहरूको विश्वास र समर्थन प्राप्त गर्यौं।